Maharesaka 19 janoary 2010
2010-01-18 @ 21:47 in Ankapobeny
Fintim-baovao sy fanehoan-kevitra manoloana ny lohahevitra maro mafana amin'izao fotoana izao indray no ambarako aloha. Somary miainga amin'ny loharano nanoratako tamin'ny aterineto voalohany indrindra indray aho izao; saingy tsy fampitana izay voalazan'ny Karajia na Kidaona maraina intsony no hambarako fa ny hevitro sy ny fomba fijeriko amin'ny ankapobeny.
Vola baoritra hoe?
Olana diso toerana amiko ny fanasongadinana io zavatra iray io na dia mety hisy aza ny fahamarinany. Ny fitiavan-tanindrazana no mametrka mba tsy hamotehana ny toe-karena malagasy efa mareforefo amin'izao fotoana izao. Mariky ny Fiandrianam-pirenena Malagasy ny vola malagasy ka tsy tsara ny manasoketa azy na dia hoe misy aza ny fanapariahana amin'ny alalan'ny banky, sampan-draharaha mikirakira vola ireo vola lazaina ho "sandoka tena izy".
Mifanindran-dalana amin'ny etsy ambony ihany. Tsy mety ihany koa ny fitakiana fanondrotan-karana izay misy manao amin'izao fotoana izao. Firenena nalatsaka tanaty krizy ve dia mbola itadiavana fanondrotan-karana ihany? Fahadisoan-kevitra ao amin'ny mpitaky azy angaha ny fiheverana fa tsy miova mihitsy io sandam-bola io no mahatonga azy ireo hanao ity fitakiana diso andro ity araka ny fijeriko. Ny fitakiana sahala amin'itonymihitsy no mahatonga ny famoronana vola izay maromiahiahy amin'izao fotoana izao. Vitan'ny mifehy ny fahefana amin'izao ny mampisondrotra ny karana fa tsy miantoka ny sandany kosa izy avy eo. Samia mieritreritra! mila fanapahan-kevitra henjana ny sahala amin'itony.
Fidiran'ny SADC eto Madagasikara?
Soso-kevitra nataona filoha Afrikana iray io fa tsy fanapahan-kevitra tsy akory. Ny haino aman-jery manana ny tombotsoany amin'izany hevitra lazaiko hoe taingina izany no tena mivoy azy fatratra. Tsy tsara velively io hevitra io satria manjary mampiray indray ny tafika efa miroanahana amin'izao fotoana izao raha jerena. Nosy ny Firenena ka manana foto-pisainana hafahafa kokoa noho ireo firenena manana sisintany mivantana amina firenen-kafa. Izay firenena mandefa voalohany amin'ny fomba ofisialy eo no lasa hotoherin'ny tafika tafavondrona. Tsy vahaolana noho izany amin'izao fotoana izao izany mandefa tafika eto Madagasikara izany. Aleo ny eto ihany no hahatsapa tena fa tsy mila vonovonoina fahatany ny olona.
Tahaka ny hoe ho avy hanatevin-daharana ny Ankolafy Madagasikara ny Praiminisitry ny FAT teo aloha. Tsara dia tsara anefa ny mihaino tsara izay nolazaina. Andrasana ny hahatongavany, Hoy i Manandafy. Tsy midika velively izany fa efa tafiditra anaty hetsika ihany koa ranamana, fa fanantenana sy firariana ny an'ilay niteny azy. Nahavory olona izy tany Toliary ka noarahabainy tamin'izany i Monja Roindefo. Hatreo ny tena azo antoka fa ny ankoatra izay dia fanombanana diso fipetraka avokoa.
Tena misy dia misy tokoa amin'ny mpanao gazety no tena kinga dia kinga tokoa amin'ny fandisoam-baovao. Tsy voatery hoe diso ny zavatra ambarany fa ny fomba filazany azy no mety haharoboka ny olona hieritreritra zavatra diso sy mifanohitra tanteraka tamin'izay nambara marina. Tao amin'ny TVM ny alahady halina, raha nanambara ny mikasika ny fotoam-pivavahana notontosaina tao Antsahamanitra ry zareo dia nambarany fa nandritra ny toriteny dia niompana amin'ny hoe: "Miposaka ny fanantenana vaovao" ny ventin-kevitra lehibe. Misy teny toa io tokoa nataon'ny mpitoriteny saingy tsy araka izay nitateran'ny mpanao gazety azy velively. Raha io fotsiny no henoina na vakiana dia sahala amin'ny manao ankolaka ny mpitoriteny hoe ny FAT no fanantenana vaovao.
Tahaka izao manaraka izao ny foto-kevitra fampidirana nataon'ny mpitoriteny ho tahiry ho an'ny taranaka izay tena nambara tokoa raha sanatria very ny tahirim-peo: "Hitory ny Lalàm-panafahana vaovao na fampanantenana vaovao satria kivy sy ketraka ary miraviravy tanana ny vahoakan'Andriamanitra." Ny asa hatao dia ny hanambara ny hafatry ny Tompo, raha nanana andraikitra telo i Jesoa dia ny maha-Mpanjaka Azy, ny maha-Mpisoronabe Azy ary ny maha-Mpaminany Azy. Jesoa tenany no efa nilaza fa raha misy mino Azy dia ny asa ataoKo (Jesoa) no ataony koa, noho izany manao ny asa maha-mpaminany azy ny fiangonana. Tsy tokony hihoatra amin'izay ambara izay tandrify ho an'izay kivy sy very fanantenana ny teny rehefa manambara izay nolazain'Andriamanitra. Rehefa tsy miteny ny fiangonana dia feo hafa tsy avy amin'Andriamanitra no ho tonga any an-tsofin'ny olona.
Hatreo ihany aloha fa dia afaka mametraka ny VETO ny mpamaky. Na dia noadinoina aza ny maha-andron'i Martin Luther King ity daty eto ambany ity any Etazonia indrindra indrindra.
Jentilisa, 18 janoary 2010 amin'ny 23:52